Qalabka nidaamka dib u soo kabashada waa mid ka mid ah gacanta ugu wanaagsan ee caawinta u user sida ay u xaqiijiso in sida ugu fiican loo dhiibaa si user ka dhigi oo ay ka heli nidaamka ilaa ay calaamaddu ku taal oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa kale oo lagu talinayaa in la abuuro flash drive USB oo dhan fursadaha nidaamka dib u soo celinta in la isticmaalo waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xusay in user waa in sidoo kale la hubiyo in doorasho dayactir daaqadaha la doorto marka flash tani waxaa loo isticmaalay iyo xulashada ikhtiyaar kale oo laga yaabaa in musuqmaasuq daaqadaha taas oo u horseedi lahaa in aan wax cabsi badan yahay oo waa khasaaraha xogta sidoo kale waa in la soo gaaray in arrintan la xiriira. In talaabadan tutorial hagitaan talaabo talaabo si ay u sameeyaan drive ka soo kabashada USB daaqado 7 iyo 8 pro laga wada hadli doono. Dib u soo celinta nidaamka sidoo kale looga hadli doonaa si faahfaahsan iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user in ay raacaan dhammaan tallaabooyinka fudud si loo hubiyo in nidaamka la soo celiyo si sahlan oo aan wax khasaaro ama waxyeello ah:
Sida loo abuuro Drive USB ah Recovery on Windows 7?
Si aad u hubiso in fikradda uu noqonayaa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee dib u soo celinta nidaamka Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in hannaanka uu soo hoos ku xusan waxaa la socda habka ugu fiican in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay dhigi Natiijada arrintan la xiriira:
1. drive ayaa USB loo adeegsado ujeedada waa in la formatted :
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in gudahood USB labada fayl magaca boot iyo ilo abuurmaan,
3. In daaqadaha labadaba fayl in lagu abuuray qarsoona by default iyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in ay soo nooleeyay adigoo gujinaya gal ka dibna doorasho la doonayo sida muujinayaa hoos ku qoran:
4. folder soo kabashada ayaa markaas waa in laga heli si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu helay mar kale:
5. Laga soo bilaabo galkan user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in faylka boot.sdi waxaa soo guuriyeen:
6. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in gudahood USB soo kaxayno file waxaa loo baxshay sidii boot.wim
7. Jidka ie C: \_ WINDOWS \_ Boot \_ DVD \_ PCAT waa in la raaco si loo hubiyo in file BCD la soo guuriyeen in folder boor eee USB ah
8. Jidka C: \_ WINDOWS \_ Boot \_ DVD \_ PCAT \_ en-US user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in file bootfix.bin la soo guuriyeen in folder kabaha:
9. In tallaabadii u dambaysay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in jidka C: \_ WINDOWS \_ Boot \_ PCAT waxaa la socda iyo file bootmgr la soo guuriyeen in xididka usha:
10. version USB cusub ee daaqadaha ayaa diyaar u ah:
Sidee si ay u abuuraan ah Drive Recovery USB on Windows 8?
Tani waxay sidoo kale waa hab fudud in la raaco si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka farshaxanka lagu dabaqo si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Tallaabooyinka in ay tahay in la raaco, sida hoos ku qoran:
1. Run ama doorasho raadinta waa in ay heli adigoo riixaya winkey ah + W. ayaa soo kabashada hadalka waxaa ka dibna in la baaray si aad u hesho in ay hal dhibic doonayo:
2. In uu suuqa kala socda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in doorasho ee ay haa tahay la doorto:
3. abuuro xijaab sanduuqa wadahadal soo kabasho furi doonaa oo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in doorasho la doonayo sida muujinayaa shaashadda hoose waxaa sidoo kale la xarriiqay:
4. drive ka dibna waa in la soo xulay:
5. daaqadaha ayaa markaas digi doonaa in waxyaabaha laga tirtirayaa iyo user waa in riix badhanka la abuuro:
6. Marka drive uu diyaar u yahay button dhameysato waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in hannaanka uu dhammaado:
Sida loo soo celiyo nidaamka Windows ka USB ah Recovery Drive?
Mar geedi socodkan waxa weeye si caddaalad ah oo fudud oo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in daaqadaha waxaa laga saaray flash ay ku jiraan faylasha tarin. Soo socda waa habka ay tahay in lagu dabaqo iyo fulinta arrintan la xiriira:
1. USB waxa la galiya in ay dekedda iyo nidaamka ay tahay in la billaabeen. Warbaahinta kabashada ama usha loo ahaado in si toos ah loo isticmaali lahaa,
2. user ayaa markaas u baahan yahay in guji tab ee fursadaha sare si ay u hubiyaan in faylka wax laga soo saaro iyo nidaamka la cusboonaysiiyey. Xulashooyinka kale ee la heli karo waxaa waxaa lagu baari karaa wanaag. Waa in la ogaadaa in geeddi-socodka ayaa sidoo kale halkan ku dhamaan:
Maxaa la ogaaday marka dib u soo celinta lagu sameeyo?
Ka dib waa dhibcood ah in la ogaaday in ay aad u hubiso in natiijada ugu fiican ayaa la siiyaa si nidaamka iyo dhibic soo celinta waxaa loo arkaa inay dhamaystiran arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xusay waa in dhibcood kuwani waa mid aad u muhiim ah in la ogaado, waana in la raaco sida uga wanaagsan ee suurto gal ah:
1. files Data meel
Waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in files xogta taas oo dib u soo celinta lagu sameeyo ah ayaa ku jirta kaalinta iyo user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah qalabka farshaxanka waa in sidoo kale loo isticmaali si loo hubiyo sameeyo in files xogta waa in meel. Waxaa sidoo kale ka dhigan tahay in geeddi-socodka dib u soo celinta uu ahaa mid guul iyo waxba u baahan tahay in hadda in la sameeyaa sida faylasha lagu helay si fudud.
2. dayactirka ayaa la doonayo la sameeyey
Sidoo kale waa mid ka mid ah dhibcood in ay tahay in la tixgeliyo. Waxa kale oo hubin doona in user helo xaqiiqada ah in arrinta la rabay la xaliyey. Haddii aan la samayn, markaas waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in talada khabiir ku yahay dooni arrintan la xiriira samaynta iyo user helo talo ugu fiican si uu u xaliyo arrinta.
Top 5 Windows Tools Recovery Password
Sida lagu Helo iyo Isticmaalka Windows Live Kan sameeyey Movie
> Resource > Windows > Sida loo soo celiyo nidaamka Windows la Drive Recovery USB ah